उपसभामुखमा बसिरहनु मेरो इच्छा होइन (भिडियो कुराकानी) | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
उपसभामुखमा बसिरहनु मेरो इच्छा होइन (भिडियो कुराकानी)
access_time२०७६ साल पुष २९ गते, मंगलवार ०३:३५ PM chat_bubble_outline Comments folder_open मुख्य खबर​ भिडियो अन्तर्वार्ता
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सभामुखको उम्मेदवार तय गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक करिब एक महिनादेखि सरेको सरेकै छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि खाली रहेको सभामुख पद खाली रहेको हो । त्यही सभामुख पदका लागि सत्तारुढ नेकपाले उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने हो । तर, संविधानतः एकै दलबाट सभामुख र उपसभामुख हुन नपाउने भएपछि तत्कालीन एमालेबाट उपसभामुखमा विजयी भएकी डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिनुपर्ने वा सभामुख अर्कै दललाई दिनुपर्ने अवस्था छ । तर, नेकपाले नछाड्ने भएपछि डा. तुम्बाहाङफेले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था छ ।
नेकपाले निर्देशन दिए पनि उपसभामुख तुम्बाहाङफेले राजीनामा दिएकी छैनन् । यसले सभामुखको निर्वाचन धकेलिँदै छ भने सत्तारुढ नेकपाभित्र पनि विवाद चर्किंदै छ । यस विषयमा उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेसँग गरिएको कुराकानी
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सकेन । यो गतिरोध कहिलेसम्म रहन्छ ?
अब यो गतिरोध अन्त्य गर्ने अर्थात् प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को हातमा छ । किनकि, नेकपासँग प्रतिनिधिसभामा बहुमत छ ।
संसद किन रोकिएको छ ? बिजनेस नभएर हो या अन्य केही कारणहरु छन् ?
संसदमा बिजनेस छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद रिक्त छ । उक्त रिक्त पद परिपूर्ति गर्न निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सत्तारुढ दल नेकपाले उम्मेदेवार बनाउँछु भनेको थिएन । तीन दिन जति भयो, नेकपाले सभामुख पदमा उम्मेद्वार बनाउँछु भनेको छ ।
यद्यपि, त्यो दलले आफ्नो उम्मेद्वार तयार गरेको छैन । त्यही कारण पुस २७ गतेको बैठक केही दिन पछि सारौं भन्ने आग्रह उहाँहरुले गरेपछि बैठक हामीले पछाडि सारेका छौं । अब माघ ६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक छ । सम्भवतः त्यो दिन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना छ ।
संसदको गतिरोध त संसदभित्रैबाट खोल्ने अभ्यास हो । तर, विभिन्न सञ्चार माध्यममा सुनिए, पढे अनुसार संसदभन्दा बाहिर कुनै राजनितिक दलको निर्णयबाट खोल्ने अथवा त्यसको गतिरोध अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा आइराखेका छन् । यसबारेमा तपाई कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ?
यसमा के हुन्छ भने संसदभित्र देखिएको गतिरोधलाई अन्त्य गर्न प्रतिनिधिसभाभित्र रहेका राजनीतिक दलहरुले कुन विषयमा कसरी गतिरोध भयो भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्छ । र, त्यसबारे छलफल र अन्तरसंवाद गरेर व्यवस्थापन गर्ने कुरा रहन्छ ।
तर, अहिलेको विषय फरक हो । किन भने अहिले प्रतिनिधिसभामा सभामुख पद रिक्त छ । त्यो रिक्त पदलाई परिपूर्ति गर्न निर्वाचन प्रकृया बढाउनु पर्ने हो । तर, अगाडी बढाउनको निम्ति सत्तारुढ दलले उम्मेद्वार दिन्छु भनेर भर्खर घोषणा गर्‍यो । यसअघि उक्त दलले भनेको थिएन । अन्य दलहरुले सभामुख पदमा उम्मेद्वार दिएर पनि उसले निर्वाचित हुने सम्भावना कम छ । त्यसैले जसले जित्छ त्यही दलले नै उम्मेदवारी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यही कारण हामीले संसद बैठकबाट सबैभन्दा पहिला सभामुख पदको निर्वाचन गर्नुपर्ने हो र त्यो प्रत्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो समय सञ्चार माध्यममा यसको केन्द्रीय पात्रको रुपमा तपाईलाई पनि राखिएको र राजीनामा मागिएको भन्ने निर्णय नै हामीले पढ्न पायौं । तपाईलाई राजीनामा मागिएको बारे जानकारी छ ?
यहाँले ठिकै कुरा गर्नुभयो । केन्द्र विन्दुमा अहिलेको प्रतिनिधिसभा जहाँ सभामुख पद रिक्त छ र त्यो भइसकेपछि प्रतिनिधिसभालाई नेतृत्व प्रदान गर्ने र नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेर काम कारबाही गर्ने उपसभामुख केन्द्रविन्दुमा रहनु स्वभाविकै हो । राजीनामाबारे चाहिँ मैले पनि सञ्चार माध्यमबाटै थाहा पाएको हो, नेकपाले राजीनामा दिनको निम्ति निर्देशन जारी गर्‍यो भन्ने ।
तर, उपसभामुखलाई कुनै एक दलका नेतृत्वबाट राजीनामा देउ भन्न मिल्दैन । यो पदमा एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति बस्दछ । किनकि, पार्टीले उम्मेदवार बनाएर बनाएपछि मैले राजनीतक दलको कुनै पनि सदस्यता नरहने गरी दल त्याग गरेको छु । यद्यपि, सबैले उपसभामुखले किन राजीनामा नदिई बसेको छ भन्ने जिज्ञासा राखेर बसिरहनुभएको मैले अनुभुति गरेको छु । दलले निर्देशन दिइसक्यो तर अटेर गर्‍यो भन्ने पनि सुनेको छु ।
यस कुरामा मेरो कुरा के छ भने प्रतिनिधिसभा एउटा संस्था हो । जुन संस्थालाई अहिले मैले नेतृत्व प्रदान गरिराखेको छु । नेतृत्व गरिराखेको व्यक्तिलाई कुनै एक दलले राजीनामा दिएर बाहिर निस्क भन्न मिल्दैन । भने पनि मैले यो संस्थालाई खाली गर्न हुँदैन भनने नै हो । किन भने संविधानले प्रतिनिधि सभालाई कुनै एउटा समयमा रिक्त हुन भनेर कल्पना गरेको छैन । त्यो परिकल्पनालाई हामिले ग्रहण गर्नुपर्छ ।
त्यसैले जबसम्म राजनीतिक दलले सभामुखको उम्मेदवार यो हो भनेर अगाडि सार्दैन त्यति बेलासम्म राजीनामा गरेर प्रतिनिधिसभालाई नेतृत्वविहीन बनाएर छोड्ने पक्षमा म छैन । किनकि, उपसभामुख पदका लागि सपथ लिँदा संविधानलाई टेकेर, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्छु भनेर कसैको डर नमानिकन अगाडि बढ्छु भनिकन मैले सपथ लिएको छु । जसको कारणले मैले राजीनामा दिएको छैन र राजीनामा दिने अवस्थामा छैन । किनभने दलले आफ्नो उम्मेदवार अगाडि बढाएको छै् ।
एउटा व्यवहारिक नजिर हेर्दा खेरी जो अहिले हटेर जानुभएको सभामुख हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि दलले निर्देशन दिएपछि राजीनामा दिनुभयो । तपाईलाई पनि त्यसै गरी भनेको छ । त्यही निर्देशन सभामुखलाई लागु हुने तर उपसभामुखलाई लागू नहुने भन्ने हुन सक्छ ?
निवर्तमान सभामुखलाई चार्ज लगाएको सबैलाई थाहा छ । त्यो चार्ज लगाएर दलले सभामुख पद्बाट राजीनामा दिएर बाहिर निस्कन निर्देशन दिन सक्ने अवस्था थियो । त्यतिवेला निर्वतमान सभामुखलाई पक्राउ गरिसकेको अवस्था थियो ।
तर, उपसभामुखको घटना फरक हो । निर्देशन पनि कुन प्रशंगमा दिएको भन्ने छुट्याउनुपर्‍यो नि । अहिले उपसभामुखलाई निर्देशन दिनु गलत हो । किनकि, प्रतिनिधिसभा स्वतन्त्र संस्था हो । दल एउटा पनि संस्था हो । ऊ राजनीतिक दल हो ऐन अनुसार दर्ता भएर चल्छ । प्रतिनिधिसभा संविधानमार्फत चल्छ । दललाई पनि संविधानले नै हिँडाएको हुन्छ ।
यी दुई संस्था फरक फरक ढंगले चल्ने संस्था हुन् । आफ्नो आफ्नो काम छन् । र अहिले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई राजीनामा दिएर छोड् भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन ।
विभिन्न सञ्चार माध्यममा सुनिएको र तपाईकै प्रतित्रियायाबाट अबको सम्भावित सभामुखको उम्मेद्वार तपाई आफैं पनि हो ? हो भने किन दलले अर्को उम्मेद्वार खोज्यो ? किन राजीनामा दिन भन्यो ?
राजीनामा दिन किन भन्यो त्यो दललाई नै सोध्नुहोला । तर दलले नभने पनि म राजीनामा दिन्छु । दलभन्दा त संविधान ठूलो हो । संविधानको धारा ९१ को उपधारा १ देखि ६ सम्म लेखिएको छ कि प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्छ । त्यसमा एक महिला अनिवार्य भनेको छ ।
अहिले संविधानलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । सभामुख पद रिक्त छ, म नेकपाले उम्मेदवार बनाएर उपसभामुख बनेको र अब सभामुख पद सत्ता पक्षले नै लिन्छु भनेपछि मैले मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेको थिएँ । अहिले पनि त्यही भनिरहेको छु
नेकपाले किन तपाईलाई सभामुखका लागि योग्य देखेन ?
दलले योग्यता किन देखेन भन्ने जवाफ दलसँग नै छ होला । तर म किन योग्य छु भने सन्दर्भमा म अहिले उपसभामुख भएर काम गरेको २ वर्ष वित्न लाग्यो । हुन त म प्रतिनिधि सभामा आएको पहिलो पटक नै हो । म पहिले उपसभामुख बन्न जान्न भनेकै हो दललाई तर जानुपर्छ भनेपछि एकदम छोटो समयमा नोमिनेसन गरें र उपसभामुख निर्वाचित भएँ । आफ्नो इच्छा नहुँदा नहुँदै त्यो गरिएको थियो । मेरो इच्छाले उपसभामुख बनेको होइन म यो कुरा फेरि दोहोर्‍याउँछु ।
अहिले पनि मेरो इच्छा होइन तर आवश्यकता हो । आवश्यकता कसरी हो भने सभामुख जो निवर्तमान सभामुख हुनुहुन्थ्यो उहाँ कुनै एक घटनासँग जोडिनुभयो उहाँ निस्किनुभयो । उहाँले यहाँबाट राजीनामा गरेपछाडि म उपसभामुख मैले केही बदमासी काम त गरेको छ छैन । अबको तीन वर्ष पूरा गर्न मैले पाउनुपर्छ । मैले कुनै फट्याई र बदमासी गरेको छैन । यौन दुराचार गरेको छैन । भ्रस्टाचार गरेको छैन भने के चार्ज लगाएर मलाई दलले निकाल्छ मिल्छ ? यो कारणले गर्दा म सभामुख पदको दाबेदार हुँ ।सभामुख पदको दावी गर्नु त अनौठो मान्नु पर्दैन स्वभाविक नै हो ।